Quotes | Jolay 2022
Teny tsiky 35 izay hitsikitsiky hatramin'ny sofina
Ireo teny sy teny milaza tsikitsiky sy mitsiky ireo dia hamelombelona ny tavanao. Mahita fahasambarana sy fifaliana ary fitiavana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fitsiky.
Vakio ireto teny 20 ireto momba ny manirery mba hanamaivanana ny anao
Ireto teny niresaka momba ny manirery ireto dia mitady hampiseho fa ny fahatsapana ho manirery na irery dia tsy zavatra ratsy foana. Indraindray ny fitokanana sy ny fitokana-monina dia mety ho tsara.
101 amin'ireo teny fohy fohy momba ny fiainana
Mitady teny fohy fohy vitsivitsy hampiasaina amin'ny fiainanao isan'andro, amin'ny media sosialy, na hanome aingam-panahy anao fotsiny? Zahao ity fanangonana 101 nalaina fohy sy tsotra ity izay manangona paosy mahery vaika.
Fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro (tsindrimandry ho an'ny maraina sy hariva)
Teny nalaina tsara momba ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro. 'Ny fantatro tsara dia ny masoandro miposaka rehetra dia toy ny pejy vaovao, fotoana iray hanitsiana ny tenantsika ary handray isan'andro amin'ny voninahiny rehetra. Fahagagana ny isan'andro. '
Teny fampitan-kevitra 45 hitondrana fihavanana amin'ireo mpitia, namana, fianakaviana ary mpiara-miasa
Ireto teny nindramina ireto dia afaka manampy anao hanana fifandraisana tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanampiana anao amin'ny fihainoana, ny fahatakaranao ary ny fahaizanao miteny.
Ireto teny nalaina avy amin'ny Dr. Seuss manaitra ireto dia tsy ho an'ny ankizy ihany - na iza na iza amin'ny taona rehetra dia afaka mianatra zavatra betsaka momba ny fiainana amin'ny famakiana azy ireo. Avia jereo.
Teny nitaona 55 hanentanana anao hanomezana teny fampaherezana vitsivitsy rehefa mila finoana kely fotsiny ianao handresena ny ady ara-tsaina.
Isaky ny mila misandratra ny toe-tsainao, dia asio amin'ireto teny nalaina aingam-panahy momba ny fiainana ireto ary jereo rehefa mitombo ny fifaliana sy ny antony manosika avy ao aminao.
Ireto teny nindramina 3 avy tamin'i Aristotle, Anne Frank, ary Nelson Mandela ireto dia hanampy anao hahita tanjaka sy herim-po hanohizana na dia mahatsiaro ho tsy afaka aza ianao.
Teny notsongaina 50 momba ny fandriam-pahalemana anaty mba hanampiana anao hahita ny anao
Ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana anaty dia fikatsahana fiainana iray manontolo, fa ny famakiana sy ny fandinihana ireo teny nalaina malaza 7 ireto dia mety hanampy anao hiverina haingana kokoa ny anao rehefa very azy io.
Iza amin'ireto teny nalaina avy tamin'ny jeneraly mamorona ireto no namorona an'i Shel Silverstein no tianao?
Teny notsongaina 22 momba ny fahatsapana hanampiana anao hifandray aminao hatrany
Vakio ireto fehezanteny mihetsika 22 ireto mba hahafahanao hatoky bebe kokoa ny tsinainao rehefa mandeha ny fotoana. Mifandraisa hatrany amin'ny fahatsapanao izao.
Fandraisana an-tsoratra 15 mahasosotra tanteraka mamono ny mockingbird
Mipetraha ary alao ny fahendrena tsy manam-potoana avy amin'ny tantaran'i Harper Lee. Ireto teny nalaina avy amin'ny To Kill a Mockingbird ireto dia lafatra tanteraka.
Ankalazao ny maha-mpampiasa anao amin'ny maha introvert anao miaraka amin'ireto fanangonana teny mihetsiketsika mahaliana momba ny tombontsoa irery ireto.
26 amin'ireo teny matanjaka indrindra amin'ny fotoana rehetra
Nisafidy tamim-pitandremana an'ity angon-dahatsoratra 26 notsongainay ity izahay, izay tsapanay fa anisan'ny tena matanjaka na voatonona an-tsoratra.
Vakio ireto teny nindramina ireto hanampiana anao hamela ny zavatra rehetra manakana anao amin'ny fiainana. Ny famelana handeha no zavatra tsara indrindra azonao atao.
29 Tompon'ireo teny miantso amin'ny fotoana tsy voafetra (sy ny hafa avy amin'ny tany afovoany)
Atombohy ny fitadiavanao an'ity fanangonana ireo teny nindramina faran'izay hendry sy misy heviny indrindra avy amin'ny tantaran'ny Tolkien's Middle Earth.
Ampahafantaro ny fahendrena tena mahavariana amin'ny sanganasa sy ny tenin'i Paulo Coelho. Ireto nalaina 50 ireto no tena tsara indrindra ary hanova ny fiainanao tokoa izy ireo.
Raha mahatsiaro very ianao amin'ny fiainana, toy ny hoe tsy fantatrao izay alehanao, ireto teny nindramina 15 ireto dia hanampy anao hahita ny lalana hiverina any amin'ilay lalana indray.
Rivotra 13 manamarina ny fiainana ao amin'ny Willows Quotes
Ankafizo ity fanangonana fitanisana sy andinin-teny mahavariana avy amin'ny The Wind In The Willows ity: hamitsiky ny tavanao tsy ho diso izy ireo.
izany no hatao rehefa mankaleo ianao
ny fomba fitiavana bebe kokoa ny vadinao
miala tsiny izahay noho ny fahaverezanao
ny fomba milalao mafy hahazoana vehivavy
miaina ny fiainana amin'ny tononkalo feno